Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Guddiga Dalxiiska Afrika » Komishanka Yurub ayaa kor u qaadaya maalgelinta tallaalka ee Afrika
Guddiga Yurub ayaa maanta shaaca ka qaaday inay doonayaan inay kordhiyaan maalgelinta lagu dardargelinayo soo saarista iyo qaadashada tallaalada iyo agabka kale ee COVID-19 ee Afrika, iyadoo lagu taageerayo €400 milyan oo kale. Guddigu wuxuu kaloo saadaaliyay €427 milyan oo Yuuro ($ 450 milyan) wax ku biirinta Sanduuqa u Diyaargarowga Faafa ee Caalamiga ah si loo taageero dadaallada looga hortagayo oo si wanaagsan looga jawaabo masiibooyinka mustaqbalka.
Ku dhawaaqida taageerada Midowga Yurub ee shirwaynaha labaad ee COVID-19, Madaxweynaha Komishanka Yurub, Ursula von der Leyen, waxay tidhi: “Sayadka tallaalku waa inuu la socdaa si degdeg ah u gaarsiinta, gaar ahaan Afrika. Mudnaanta maanta waa in la hubiyo in qiyaas kasta oo la heli karo la maamulay. Iyo sababta oo ah waxaan ognahay in jawaabta ugu fiican ee dhibaato kasta oo mustaqbalka caafimaad ee iman karta ay tahay ka hortagga, waxaan sidoo kale xoojineynaa taageerada aan ku xoojineyno nidaamyada caafimaadka iyo awoodaha u diyaarsanaanta."
Guddoomiyaha Iskaashiga Caalamiga ah, Jutta Urpilainen, ayaa tiri: “Faafida ayaa soo baxday oo sahayda tallaalku waa xasiloontay, iyada oo ay uga mahadcelinayaan qayb ahaan tabarucaadda deeqsinimada leh ee maaliyadeed iyo nooceeda ah ee Kooxda Yurub ay ugu deeqeen COVAX. Waxaan maqalnay asxaabteena Afrikaanka ah: caqabada hadda waa in la dardargeliyo soo saarista iyo qaadashada tallaalada dhulka, iyo in laga jawaabo baahiyaha kale ee jawaabta COVID-19, oo ay ku jiraan daaweynta, ogaanshaha, iyo nidaamyada caafimaadka. Sidaa darteed waxaan la qabsan doonaa jawaabtayada si aan uga caawino waddammada inay wax ka qabtaan masiibada anagoo adeegsanayna taageero ku habboon oo aan u diyaargarowno mustaqbalka."
Laga soo bilaabo tallaalada ilaa tallaalka, u diyaargarowga masiibada
Iyada oo laga jawaabayo isbeddelka baahida saadka ee tallaallada COVID-19, Midowga Yurub wuxuu la qabsanayaa dadaalladiisa isagoo taageeraya isticmaalka ugu waxtarka badan ee qiyaasaha la heli karo. Xaqiijinta helitaan siman oo agabka aan tallaalka ahayn ayaa weli ah lama huraan, sidoo kale waxay kor u qaadaysaa adkeysiga nidaamyada caafimaadka si loogu diyaargaroobo masiibada soo socota. Taageerada maanta la ballan qaaday, iyadoo qayb ka ah jawaabta kooxda Yurub ee caalamiga ah, waxay doonaysaa inay sii waddo ujeedooyinkan.
€300 milyan oo euro oo lagu taageerayo tallaalka Afrika iyada oo loo marayo Xarunta COVAX iyo la-hawlgalayaasha kale. Lacagaha waxaa loogu talagalay in lagu taageero sahayda agabka caawinta sida silingaha, maareynta silsiladaha saadka, saadka iyo bixinta adeegga, iyo maamulka tallaalada.
€100 milyan oo taageero ah si loo galo agabyada kale ee COVID-19: ogaanshaha, daaweynta iyo xoojinta nidaamyada caafimaadka. Iyada oo ay weheliso 50 milyan oo Yuuro oo dhawaan loo ururiyey isla ujeeddadaas, taageeradan oo qiimaheedu dhan yahay 150 milyan oo Yuuro guud ahaan waxa loogu talogalay in la mariyo Habka Ka-jawaabista COVID-19 ee Sanduuqa Caalamiga ah ee La-dagaalanka AIDS-ka, Qaaxada iyo Duumada.
€427 ($450) milyan loogu talagalay Sanduuqa U-diyaargarowga Faafa ee Caalamiga ah ee la dhisayo, iyadoo ku xiran heshiis maamulkiisa. Sanduuqa ayaa ka faa'iidaysan doona dhaqaalaha u diyaargarowga iyo wax ka qabashada masiibada, isaga oo ka caawinaya in laga fogaado soo noqnoqoshada saamaynta xun ee caafimaadka iyo dhaqan-dhaqaale ee COVID-19 mustaqbalka.
Madaxweyne von der Leyen iyo Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay Ajendaha US-EU ee ka hortagga Faafida Caalamiga ah, Talaalka Adduunka, Badbaadinta Nolosha Hadda iyo Dib-u-soo-celinta Wanaagga, oo laga bilaabay Shirweynihii ugu horreeyay ee COVID-19 bishii Sebtembar 2021. bayaan, waxay qeexayaan iskaashiga EU-Mareykanka ee socda iyo yoolalka la wadaago ee dhinacyada sinnaanta tallaalka iyo tallaalada hubka; xoojinta silsiladaha sahayda caalamiga ah iyo wax soo saarka; hagaajinta qaab dhismeedka amniga caafimaadka caalamiga ah; u diyaarinta khataraha iyo khataraha cudur-sidaha mustaqbalka; iyo cilmi baarista iyo horumarinta tallaalada cusub, daaweynta iyo ogaanshaha.
Covid-19 Europe Guddiga Yurub Qaaxada tallaalka
Cabify waxay ka shaqeysaa Madrid kooxdii ugu horreysay ee 40 ah ...
Talooyin Loogu Talagalay Guusha Sida Arday Blogging Safar ah
Daawaynta Cusub ee Dadka Waaweyn ee leh Psoriatic Firfircoon
daawayn cusub oo balasmajet ah oo lagu dawaynayo nabarrada raaga
Suuqa Kala wareejinta Bukaan-socodka ayaa la filayaa inuu gaaro...